Sir Fashiliyaha Football Leaks Oo Shaaca Ka Qaaday Faah Faahinta Mushaarka Iyo Lacagaha Heshiiska Cusub Ee Lionel Messi Iyo Xog Layaableh Oo La Ogaaday. - Laacib.net
Sir Fashiliyaha Football Leaks Oo Shaaca Ka Qaaday Faah Faahinta Mushaarka Iyo Lacagaha Heshiiska Cusub Ee Lionel Messi Iyo Xog Layaableh Oo La Ogaaday.
Sir Fashiliyaha caanka noqday ee Football Leaks ayaa soo bandhigay faah faahin layaableh oo uu ku shaaciyay qiimaha lacagta ay Barcelona siin doonto Lionel Messi kadib heshiiskii cusbaa ee uu dhawaan saxiixay. Football Leaks oo sanadihii ugu danbeeyay dhibaato wayn ku noqday kubbada cagta isla markaana banaanka soo dhigay siro badan oo qarsoonaa ayaa sheegay in uu helay dhokumentiga heshiiska cusub ee Lionel Messi.
Barcelona ayaa waqti dheer oo la sugayay heshiis cusuboonaysiinta Lionel Messi waxay soo bandhigtay in xidiga ree Argentina uu saxiixay qandaraas cusub oo dhacaya sanadka 2021 markaas oo noqon doonta in xili ciyaareedkiisa 17 aad uu Camp Nou ku qaadan doono laakiin qiimaha lacageed ee Barcelona watigan ka bixi doona ayaa ah mid layaableh.
Sida uu shaaciyay Football Leaks isla markaana lagu daabcay wargayska ree France ee Mediapart oo ka mid ah wargaysyada uu Football Leaks Yurub ka samaystay si ay u daabacaan xogta uu soo xado ayaa lagu sheegay in Lionel Messi uu sanadkii Barcelona ka qaadanayo 100 milyan Euros!.
Waxaana warbixinta Football Leaks ee lagu daabacay Mediapart lagu sheegay in Barcelona ay heshiiska cusub ee Messi ku bixin doonto lacag ka badan 400m euros ee afarta xili ciyaareed ee soo socda. Messi ayaa jeebka ku shuban doona 50 milyan euros oo net ah oo ayna cashuurtu ku jirin halka lacagaha kale ay yihiin gunooyin kale.
Lacagta ayna cashuurtu ku jirin isla markaana aan gunooyinka Messi ka mid ahayn ayuu sanadkii ku qaadanayaa 50 milyan euros waana lacag laba jibaar ka badan inta uu hadda Ronaldo ka qaato Real Madrid. Sidoo kale Football Leaks ayaa shaaca ka qaaday in mushaarka Neymar ee sanadkii uu yahay 37m euros.
Intaa kadib waxaa faah faahin dheeraad ah laga bixiyay qaabka mushaarka waalida ah ee Lionel Messi u qorshaysan yaahy iyada oo lagu sheegay in 71 milyan euros ka mid ah 100 milyan ee Messi loo qorsheeyay sanadkii uu yahay mid xadidan taas oo la micno ah in mushaarkiisa ay cashuurtu ku jirtaa uu yahay sanadkii 71 milyan Euros iyada oo boqolkiiba 15% mushaarkan ahi uu ka imanayo xuquuqda sawirkiisa.
Lionel Messi ayaa sidoo kale 70 milyan euros ku heli doona haddii uu daawac ka noqdo heshiiska uu saxiixay oo aanu Barcelona ka bixin inta uu heshiiskiisani jiro ee 2021. Qaabka ay xisaabsan lacagta guud ee heshiiska cusub ee Messi noqonayso: (71×4 = 284 + 63.5 + 70 = 417.5 milyan euros).
Ugu danbayn gunooyinka kale ee uu Messi heshiiskiisa ku qaadan doono waxaa ka mid ah in 60 kii kulan ee uu ciyaaraba uu heli doono 1.9 milyan Euros halka haddii ay Barcelona ku guulaystay Champions League uu heli doono 12 milyan euros.
Faah faahinta lacagaha uu Messi ku qaadan doono heshiiskiisa cusub ayaa ah mid layaableh balse la filayo in ay xaalada ku sii xumayn doonto Real Madrid iyada oo markii horeba uu Ronaldo si wayn uga cadhaysnaa in uu qaadanayo mushaar aad uga hooseeya Neymar jr iyo Lionel Messi.